CrossFit: waa maxay, maxaa loogu talagalay maxaase faa'iidooyin ah | Ragga Stylish
Waxaa jira dad aan dooneynin inay helaan kaliya sharraxaadda marka ay aadayaan tababarka, laakiin inay horumariyaan waxqabadkooda iyo awooddooda jireed. Adkaysi, dabacsanaan, awood, xoog, dheelitir, iwm. Dhamaan awoodahan waxaa lagu heli karaa iyadoo lagu tababaro hal isboorti. Waxay ku saabsan tahay CrossFit. Waa isboorti ku saleysan tababar firfircoon oo xoog leh kaas oo kaa caawinaya inaad horumariso dhammaan awoodahan iyo ugu dambeyntiina inaad horumariso waxqabadkaaga. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad u cuntid cunto sida ku xusan ujeedooyinkaaga oo buuxiya baahiyaha jimicsigaaga, waxaad sidoo kale heli kartaa muuqaal quruxsan oo qurux badan.
Maqaalkan waxaan diiradda saari doonnaa sida ay u tababbarto CrossFit iyo maxay ka faa'iideysaneysaa cayaaraha kale.
1 CrossFit oo ah isboorti xoog badan
3 CrossFit miyuu ku fiican yahay helitaanka murqaha?
CrossFit oo ah isboorti xoog badan
Waxaa jira dad karti u leh inay ordaan 60 daqiiqo oo xiriir ah isla markaana ay kilo badan ku qaadaan jimicsiyada aasaasiga ah sida keydka saxaafadda. Dadkani waxay ku jiraan xaalad jireed oo wanaagsan, laakiin wax badan ayey sii horumarin karaan. Anshax sida jir dhiska ama qaadista culeyska jirdhiska jimicsi kama dhigeyso inaad yeelato iska caabin, laakiin kaliya xoog iyo hypertrophy. Dhinaca kale, haddii aad kaliya ku tababarto adigoo ordaya, Sidoo kale ma abuuri doontid la qabsasho ku saleysan xoog iyo murqo kordhay.
Waxaa la muujiyey inay jiraan faragalinyo jirka ah markaan sameyno layliyo kala duwan iyadoo kuxiran ujeedada aan raadineyno. Haddii hadafkeenu gebi ahaanba qurxoon yahay oo aan dooneyno inaan helno murqo, waa inaan diirada saarnaa oo keliya culeyska. Haddii aan si joogto ah u sameyneyno jimicsi wadnaha ah oo muddo dheer soconaya, faragelintani waxay si xun u saameyn doonaan is-waafajinta muruqyada ee ay tahay in la sameeyo si loo gaaro hypertrophy. Ka soo horjeedka ayaa sidoo kale dhici doonta, haddii aan dooneyno inaan noqono ciyaartooy wax qabad sare leh oo cuntadeena iyo tababarkayagu ku saleysan yihiin qaadista culeyska, waxaan wax u dhimeynaa guulaha iska caabinta
Tan waxaa looga hortagi karaa tababarka CrossFit. Waa edbin aad ku shaqeyn karto oo aad ku wanaajin karto adkeysiga iyo xoogga jirka isla waqtigaas. Waana in jimicsigooda jimicsiga uu yahay mid isku dhafan labada cilimood ee loo sameeyay dadka doonaya inay horumariyaan labadaba. Waad dhihi kartaa waxay u shaqeysaa sida barnaamijka jimicsiga jirka oo aan ku leenahay tababar dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ah, laakiin lagu horumaray si xoog leh.
Awoodda sare waxay fure u tahay jabinta istaagyadeena iyo inaan ka sarreysano nafteenna. Haddii aan had iyo jeer u tababbarano si isku mid ah, isku miisaanno iyo isku wakhti ah, ma siin doonno jirka suurtagalnimada in la abuuro la qabsiyo ha ahaato iska caabin iyo xoog labadaba.
Dad badan wali si fiican uma yaqaanaan waxa lagu qabto isboortigan ama waxa loogu talagalay. Ahaanshaha cusub, weli waxaa jira waxyaabo badan oo laga shaqeeyo oo wax laga barto. CrossFit waa mid ka mid ah howlaha isboorti ee ugu dhameystiran adduunka. Wuxuu u shaqeeyaa qaab aad u kala duwan sidaa darteedna hawlihii keli ahaanta lama qaban. Waxaa jira dhowr meelood oo jireed oo muhiim ah oo laga shaqeeyo CrossFit.
Waxa ugu horreeya waa dhaqdhaqaaq. Waa wax da 'da' iyo nolol-fadhiisinimo lumaya. Dadku dib ayey dib ugu soo ceshan karaan oo ay ku heli karaan firfircoonaan badan jimicsiga 'CrossFit'. Dhinac kale waa isku-duwidda, isu-dheellitirka iyo dabacsanaanta. Saddexdaas dhinac ayaa isku xidhan. Kuwani waa xirfado aan luminno waqti ka dib iyo markaan sii gaboobayo oo dib loogu soo celin karo ama lagu kasban karo shaqooyinkan xoogga badan.
Yoolalka ugu caansan ee dadka tababara CrossFit waa: hel xoog, awood, adkaysi, sax, awood neefsasho, adkeysi muruq iyo xawaare. Adoo ka shaqeynaya awoodahan oo dhan qaabab kala duwan oo aan macquul ahayn, waxay keenaysaa u hoggaansamida dhammaan barnaamijyada tababarka. Waxaad u badan tahay inaad maqashay qof dhahaya in kabadan hal jeer in tababarka culeyska jirdhisku uu yahay mid aad u caajis badan. Waxaa laga yaabaa in loogu talagalay qof aan xiiseyneyn tababarka oo kaliya doonaya inuu gaaro himilooyinka qurxinta. Dadkan, CrossFit waxay u noqon kartaa xulasho wanaagsan.
CrossFit miyuu ku fiican yahay helitaanka murqaha?
Wax maskaxda lagu hayo waa in haddii ujeeddadaadu tahay oo keliya kasbashada muruqyada, CrossFit laguma talinayo. Nidaamka koritaanka murqaha waa mid aad u gaabis ah oo dhib badan. Waxay u baahan tahay taxane ah la qabsashada muruqyada iyo habdhiska dareenka oo noqon kara mid dhib badan markii la tababarayo isboortigan xoogga badan. Intaa waxaa dheer, markaad rabto inaad muruq hesho, waxa ugu habboon ayaa ah inaad la qabsato cuntadaada iyo jimicsigaaga.
Si loo abuuro muruq cusub loona kordhiyo unugyadayada waxaa lagama maarmaan ah in lagu jiro badinta kalooriga. Tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la cunayo kalooriyo ka badan inta aan ku bixinno firfircoonaanteenna jidhkeenna iyo maalinteenna maanta. Haddii aan haysanno shaqo dalbasho ah oo korka ah waxaan ku tababbaraynaa CrossFit, marka laga reebo in jimicsigu aanu diirada saarin hypertrophy, waa inaan cunnaa kalooriyaal aad u tiro badan oo aan waaraynin waqtiga.
Sidaa darteed, waa inaad si cad u qeexdid ujeedooyinka aad rabto inaad ku guuleysato markii aad bilowdo hawlgal. Haddii aad rabto inaad wax yar ka kasbato wax walbana oo jirkaagu uusan ahayn ujeeddadaada ugu weyn, CrossFit waa ikhtiyaar wanaagsan. Ma dhahayo in CrossFit uusan gaarin muuqaal wanaagsan, laakiin ma ahan wax fiican. Xaqiiqdii, waa wax caadi ah in la arko dad ku jiray murqo helitaanka tababar weji leh culeysyo jimicsi oo bilaabaya Crossfit qeybta qeexitaanka. Waxay tan u sameeyaan sababta oo ah waa edbinta halka ay xoogeedu aad u sarreyso oo sidaas darteed, kharashka kaloriinta ayaa ka sarreeya.
Xaaladahaas oo kale, caqligu waa mid xad dhaaf ah. "Waxaan sameyn doonaa jimicsi xoog leh, halkaas oo aan sidoo kale ka shaqeeyo xoog, waxaan ku bixiyaa kalooriyo badan isla markaana ilaaliyaa kalooriga oo iga caawiya inaan si dhakhso leh u lumiyo baruurta." Tani waxay umuuqataa sida ugufiican ee xulashada, laakiin maahan. Jimicsiyada xoogga badan ma kuu ogolaanayaan inaad kula shaqeyso culeysyo badan. Haddii muruqyadu aysan helin wax kiciya si ay u ilaaliyaan mug la mid ah kii ay lahaayeen, haddii aad ku jirto tamar yaraan, waxay u badan tahay inaad ku dhammaan doonto luminta muruqyada aad heshay markii aad lumiso dufanka, maadaama jidhku uusan ahayn xiisaynaya in ay haysato shay kharashkiisu ku kaydsanayo.
Waxaan rajeynayaa in tilmaamahan aad wax badan ka baran karto CrossFit iyo astaamaha ay yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » CrossFit